Dhibaatooyinka Ciyaaraha Steam ee Wadayaasha Nvidia | Laga soo bilaabo Linux
Steam ayaa u yimid Linux si uu u furo albaabka si loo kordhiyo tirada cinwaannada taas ayaa lagu maamuli karaa nidaamka kaliya maahan sii deynta cayaaraha in ay la jaan qaadayaan madal haddii kale iyadoon lagu darin mashruuca Proton, kaas oo ku daraya awooda socodsiinta ciyaaro la jaan qaadi kara oo keliya Windows ka Linux.
Xitaa iyada oo waxaas oo dhan ah, macmiilka uumiga ah wuxuu leeyahay dhibaatooyin qaar in lagu ciyaaro qaar ka mid ah Linux oo wata kaararka sawirada ee Nvidia. Tani ma aha dhibaato halis ah maxaa yeelay waa wax walba maxaa yeelay cayaaraha qaarkood waxay leeyihiin dhibaatooyin haddii nidaamka qalliinka ee ay ku rakiban yihiin uusan lahayn 32-bit maktabado sawiro ah.
Iyo, inkasta oo arjiga Steamku yahay 64-bit, inbadan oo ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga dukaanka Steam kuma shaqeeyaan 64 gabal. Taabadalkeed, waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin maktabadaha garaafyada 32-bit ee da'da ah inay si sax ah u shaqeeyaan.
Si tan loo xaliyo, waxaan ku bilaabi karnaa rakibaadda maktabadaha 32-bit ah nidaamka. Waxaan tan ku samayn karnaa annagoo fureyna xarun aan ku qori doonno amarrada soo socda.
Kuwa isticmaala Ubuntu ama qaybinta ku saleysan, aan ku darno bakhaarka soo socda:
Waxaan aadeynaa menu-ka oo aan ka raadineynaa "Software iyo updates" ama barta aan ka furan karno:
Halkan waxaan dooneynaa inaan ka raadinno "Darawallo Dheeraad ah" oo aan ka beddelno darawalka hadda socda ee Nvidia una beddelo mid ka mid ah liistada oo cusbooneysiin badan.
Hadda, kuwa isticmaala Debian, terminaalka waxaan sare ugu qaadi doonnaa mudnaanta:
Waxaanan ku qori doonnaa boosteejada:
Iyadoo loogu talagalay kuwa isticmaala Arch Linux ama qaar ka mid ah tanWaa inaad ogaataa in bulshada Arch Linux ay qabato shaqo weyn oo ah inay siiso dadka isticmaala aaladaha ay ku habeeyaan 32-bit maktabadaha sawirada si ay Steam ugu shaqeyso sida ugu fiican.
Si tan loo sameeyo, waxaan fureynaa terminal waxaana qoreynaa:
Kiiska Fedora, Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo lagu heli karo maktabadaha loo baahan yahay si loo joojiyo arrimaha la xiriira ciyaaraha Steam ee kala duwan.
Tan awgeed waxaan ku taageereynaa keydka RPM Fusion, kaas oo loogu sahlay qaab fudud oo fudud qaababkii ugu dambeeyay ee qeybinta.
Hadda, terminaalka kaliya waa inaan ku qornaa amarka soo socda:
Ka dibna waa inaanu kala dhig dhigno maktabadaha 32-bit adoo ku rakibaya xirmada:
Haddii rakibidda maktabadaha 32-bit ee nidaamkaaga aysan kuu shaqeyn, waad isticmaali kartaa qaabkan kale.
Waa kuwee wuxuu ka kooban yahay ka tirtirka arjigaaga Steam oo dib u rakib, laakiin adigoo adeegsanaya nooca Flatpak.
Tan iyo markii Steam laga rakibo Flatpak, maktabadaha Nvidia oo dhan ayaa sidoo kale si otomaatig ah loogu rakibaa nidaamka Flatpak, iyagoo hubinaya in dhammaan cayaaraha si habsami leh u socdaan.
Si loo rakibo nooca Flatpak ee Steam, waa inay marka hore ku daraan taageerada Flatpak nidaamkaaga, tan waxaa lagu sameyn karaa adoo ku qoraya mid ka mid ah amarradan soo socda galka.
Debian, Ubuntu ama soosaarayaasha kuwan:
Wixii kiiska nooc kasta ah OpenSUSE:
Iyadoo loogu talagalay kuwa isticmaala Arch Linux ama qaybinta ka soo baxda tan:
Kuwa idinka ah ee adeegsada Fedora, uma baahnid inaad ka walwasho ku darista taageerada maaddaama tan ay awood u leedahay inay ku dhacdo nidaamkaaga.
Durba taageero dheeri ah, hadda waxaan qori doonnaa amarradan soo socda si aad u awoodo inaad ku rakibto Steam ka flatpak nidaamka:
Marka rakibistu dhammaato, waa inaan dib ugu laabannaa Steam oo aan soo dejisannaa ciyaaraha ay tahay inay hadda si habsami leh ugu shaqeeyaan nidaamkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dhibaatooyinka Ciyaaraha Steam ee Wadayaasha Nvidia
xow: kantaroole Linux ah oo loogu talagalay Xbox One Controller